🥇 ubalo lwamazinyo
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 344
Ividiyo yokuphicothwa kwamazinyo
Yenza iodolo accounting yamazinyo
Amazinyo kunye neeklinikhi zamazinyo zivula yonke indawo. Ngamnye kubo unoluhlu lwabathengi abakhetha iziko elithile kuxhomekeke kwindawo yomsebenzi, indawo yokuhlala, kunye noluhlu lweenkonzo ezibonelelweyo, umgaqo-nkqubo wamaxabiso kunye nezinye izinto. Accounting abaxhasi kwi amazinyo yinkqubo enzima kakhulu kwaye ichitha ixesha. Kuyimfuneko kungekuphela ukugcina kunye nokuhlaziya ulwazi loqhakamshelwano kwangexesha, kodwa ukulandelela imbali yezonyango yomthengi ngamnye, kunye nokugcina amaxwebhu amaninzi okunyanzeliswa kunye nengxelo yangaphakathi. Njengoko amazinyo ekhula, kunye neenkqubo zokuvelisa amazinyo, ukubalwa kwabaxhasi beziko lamazinyo kuyaphucuka. Ngethamsanqa, inkqubela phambili kwezobuchwepheshe kunye neemarike zeenkonzo zonyango zihlala zihamba kunye. Oogqirha bamazinyo ngoku banokulibala malunga nesidingo sokuchitha ixesha elininzi yonke imihla begcwalisa iifom kunye namaxwebhu, begcina amakhadi abathengi kunye nembali yabo yezonyango. Ngoku iinkqubo zokwenza ingxelo zokulawulwa kwamazinyo zinokuzenzela zona. Ukuza kuthi ga ngoku, ukusetyenziswa kwe-USU-Soft kusetyenziso lobalo lwamazinyo kungqineke kweyona ndlela ifanelekileyo. Yoyisa ngokukhawuleza intengiso yamazwe amaninzi. Olona ncedo luphambili lokusetyenziswa kogcino mali lwamazinyo xa kuthelekiswa neempawu zazo ngumgangatho ophezulu, ukuthembeka kunye nokusetyenziswa ngokulula.
Abalawuli kunye nabancedisi bahlala behlawulwa ngokweyure basebenza-iiyure okanye iishifti. Inkqubo ye-USU-Soft yolawulo lobuchwephesha bamazinyo inexesha kunye nenqaku lokuzimasa elivumela umphathi wamazinyo ukuba agcine umkhondo xa abasebenzi beza emsebenzini naxa beshiya umsebenzi. Ukwenza ukugcinwa kwexesha, qhagamshelana neqela lethu lenkxaso yezobugcisa. Xa usenza oku, kuya kufuneka uthathe isigqibo kwangoko ukuba uyafuna na ukufaka ixesha kunye nokuzimasa kunye nokugcinwa kwexesha. Inkqubo ye-USU-Soft ye-accounting ye-dentistry ikuvumela ukuba uvavanye iintlobo ezahlukeneyo zemisebenzi eyenziwa ngabasebenzi ngeendlela ezahlukeneyo. Ukugcina iirekhodi zakho zezigulana ezingalaliswayo kuqinisekisa ukuba ulwazi malunga nonyango lomthengi, oluqokelelwe ngokupheleleyo endaweni enye, alulahlekelwanga naphi na, kwaye ingxaki yokubhalwa ngesandla okungafundekiyo ngoogqirha bamazinyo isonjululwe ngokupheleleyo. Ukunyanga kwamazinyo kwabaxhasi, kunye nogqirha wamazinyo oyintloko, onokufikelela kuwo onke amakhadi, uya kuhlala ekwazi ukufumana ngokukhawuleza ulwazi abanomdla kulo.
Gcina incwadi yonyango yomthengi. Emva kokunyanga isigulana, ugqirha wenza irekhodi kwincwadi eneenkcukacha zesigulana ukufaka ulwazi malunga nokuqeshwa kwangaphambili. Ugqirha kufuneka achaze amazinyo ebesebenza nawo kwaye azalise iindawo 'Uxilongo', 'Izikhalazo', 'Anamnesis', 'Injongo', 'Unyango', 'Iingcebiso' (ukuba kukho imfuneko, unokongeza amanye amacandelo okanye cima ezingafunekiyo). Imbali yamatyala ayinakugcwaliswa kungekuphela ngugqirha wamazinyo, kodwa nangaye nawuphina umqeshwa onikwe ilungelo lokufikelela kwiirekhodi zabangaphandle zabanye abasebenzi. Ngokuzenzekelayo, ugqirha ongenalo eli lungelo lokufikelela unokwenza kuphela kwaye ahlele iimbali zezigulana zakhe.
Ukutsalela umnxeba izigulana yinxalenye ebalulekileyo yomsebenzi womlawuli. Ungabhala umyalezo obhaliweyo ngolwazi malunga nokuqeshwa kwinkqubo yobalo lwamazinyo kwaye uwuthumele kwiqela labantu, emva koko ubize ezo zigulana zingakhange zifumane umyalezo. Oku kuluncedo xa ungenalo ixesha lokufowuna okanye ugqirha wamazinyo unezigulana ezininzi. Cofa kwiqhosha 'Thumela i-SMS' ngaphezulu koluhlu lwezigulana kwaye emva koko kuvela iwindow pop-up enoluhlu olupheleleyo lwemiyalezo elindele ukuthunyelwa. Uyazibona izigulana ezinemiyalezo ethunyelweyo, kwaye ungazifihla ukuze ubone abo zithunyelwe kubo imiyalezo. Ukuba isigulana asiqinisekisanga ukuqeshwa kwabo, unokucwangcisa kwakhona okanye urhoxise ukuqeshwa ngokuthe ngqo kwinkqubo yobalo lwamazinyo. Ukufumana ngokukhawuleza amakhadi ezigulana kwaye uwanike iiofisi zoogqirha, amanqaku esicelo sobalo aluncedo olukhulu. Cofa ekunene kumhla owufunayo kwikhalenda kwaye ukhethe 'Printa lonke uluhlu lokuqeshwa ngomhla'. Ukuhlelwa kwealfabhethi kusetyenziswa ukufumana ngokukhawuleza amakhadi kwifayile yephepha ngegama; ukuhlela izitulo zamazinyo kusetyenziselwa ukuhambisa amakhadi ziiofisi, ukuze isiguli esiqeshwe ukuba sicwangciswe kwangoko siphezulu kwimfumba yamaphepha.
Ukuba awugcini amakhadi ephepha ngokulandelelana kwealfabhethi, kuya kufuneka utshintshe ukhetho lokuprinta kuluhlu lokuqeshwa lolo suku. Ukwenza oku, umqeshwa onendima kaMlawuli okanye omnye umsebenzi onemvume yokutshintsha itemplate yoxwebhu kufuneka aye 'kuseto', 'itemplate zoXwebhu', afumane 'Ukuqeshwa: Izigulana zabo bonke oogqirha zosuku' kwaye utshintshe ukuhlelwa ngamagama ukuhlelwa ngenombolo yerekhodi yonyango okanye ukuqeshwa okokugqibela.
Izibonelelo zenkqubo ye-USU-Soft yolawulo lobuchwephesha bamazinyo ziyazithetha. Isantya somsebenzi kwindawo yakho yamazinyo ngokuqinisekileyo siya kukhawuleziswa ngokubonakalayo, kunye nokuchaneka komsebenzi kunye nokunxibelelana ngokuthe ngqo nabaxumi. Nangona kunjalo, ayisiyiyo yonke le nto. Emva kokuba uqale ukusebenzisa inkqubo accounting zamazinyo, uqinisekile ukufumana iziphumo ngoko nangoko. Nangona kunjalo, ixesha elithile emva koko unokuziva usithemba ngokwaneleyo ukuba ufumane imisebenzi eyongezelelweyo enokwenza ukuba amazinyo akho abengcono! Ukuqinisekisa ukusebenza ngokugqibeleleyo kwenkqubo yakho yobalo, kufuneka iqela labadwelisi benkqubo abakulungeleyo ukukunceda ukuba uphendule xa ufuna. Njengoko besesitshilo, ubalo-mali luya kuhlawulwa ngenxa yombulelo kwinkqubo yethu yobalo!